Muxuu yahay ciqaabta naagta Nigeria u dhalatay markii ay ninkeeda gogol dhaaf ku sameyso? – Filimside.net
Muxuu yahay ciqaabta naagta Nigeria u dhalatay markii ay ninkeeda gogol dhaaf ku sameyso?
March 13, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Intaad aduunkaan joogtid waxkasta oo kaa yaabiyo waad arkeysaa waxaana waxyaabahaas kamid ah ciqaabta ay marto naagta khaa’inada ah ee wadanka Nigeria u dhalatay iyada iyo ninka ay khayaanada la sameysayba.
Naagta khiyaano ku sameyso ninkeeda iyo ninka ay khayaanada la sameysayba aduunkaan daafihiisa waxaa jiraan dhowr siyood oo loo ciqaabo oo anaga oo muslimiin ah naagtii ayadoo laqabo ninkale u galmooto waa in Dhagax lagu dilaa.
Reer galbeedka agtooda waxba kama ahan hase yeeshee wadanka Nigeria waxaa jiro dhaqan ugaar ah oo ay leeyihiin kaasoo ah in naagta iyo ninkaba markii dambiga lagu cadeeyo ama ay qirtaan dadka magaalada ama tuulada kunool oo dhami la isku balamiyo.
Markii meel fagaare ah la isugu yimaado ayaa waxaa lakeenaa ninkii iyo naagtii khiyaanada sameeyay oo qaawan kadibna dadka hortooda ayaa lagu amrayaa iney isku galmoodaan.
Hadii ay diidaan waa la garaacayaa ilaa ay dadka hortooda isugu galmoodaan waxaana daawanayo dhamaan dadka tuulada ku nool min caruur ilaa ciroole si ay ugu cibro qaataan.
Intii ay galmada socoto ninka naagta qabo ma eegi karo waxaas sidaas darted wuxuu aadayaa guriga asigoo waxkasta oo naagtiisa laheyd gubaayo si uu noloshiisa uga saaro.
Markii ay naagta iyo ninka galmada dhameeyaan ayaa sixun loo garaacayaa kadibna qabiilka ayaa laga saarayaa waxaana laga burinayaa gabi ahaanba tuulada qabiilka daganyahay.
Hadaba akhristow sidee u aragtaa ciqaabta ay reer Nigeria marsiiyaan naagta iyo ninka khayaanada fala?
Waxaa Aqrisay 1,020